Rag u dhashay Burundi oo Shabaab ku biiri rabay oo la qabtay - Caasimada Online
Home Warar Rag u dhashay Burundi oo Shabaab ku biiri rabay oo la qabtay
Rag u dhashay Burundi oo Shabaab ku biiri rabay oo la qabtay
Nairobi (Caasimadda Online) – Waxaa gacanta lagu dhigay ilaa 4 rag ah oo u dhashay daka Burundi oo doonayey inay ku biiraan Uururka Al-Shabaab sida ay ka dhawaajiyeen Ciidamada ammaanka dalka Kenya .
Afartaan qof oo watay dhalashada dalka Burundi ayaa waxaa laga qabtay degmada Isiolo-Marsabit xilli ay ku soo jeedeen Soomaaliya, sida ay sheegeen Saraakiisha ciidamada Kenya oo maanta saxaafadda la hadlay.
Xubnahaas ayaa la sheegay in laga helay cadeymo muujinaya in ay u socdeen Somaliya, islamarkaana ay doonaayeen in ay ku biiraan Al-Shabaab.
“Waxa ay ciidamada Booliska ay joojiyeen gaari u socday dhanka Soomaaliya, waxaana ay ka heleen afar qof oo u dhashay Burundi oo doonaayay in ay ku biiraan Al-Shabaab.” ayuu yiri Sarkaal Sare oo ka tirsan ciidamada Booliska Kenya.
Magacyadda raga la qabtay ayaa lagu kala sheegay Ntakarutimana Benerd, 41 sano jir ah, Niyongere Yuusuf, 32 sano jir ah Nshimirimana Fulgnce Shadady, 31 Sano jir ah iyo Booso Abderauf, 20 jir.
Al Shabaab ayaa waxaa ka bar bar dagaalama Ajaanib badan oo u kala dhashay dalalka deriska la’ah Somaliya, kuwaasi oo fuliya weerarada kala duwan ee ka dhaca gudaha dalka Kenya.